Rudo Runotibatsira Kutsungirira Patinovengwa | Nharireyomurindi Yekudzidza
“Ndinokurayirai zvinhu izvi, kuti mudanane. Kana nyika ichikuvengai, munoziva kuti yakandivenga isati yakuvengai.”—JOH. 15:17, 18.
RWIYO 129 Ticharamba Tichitsungirira
1. Maererano naMateu 24:9, nei tisingafaniri kushamisika kana nyika ikativenga?
JEHOVHA akatisika kuti tide vamwe uye kuti tidiwe. Saka kana mumwe munhu akativenga tinorwadziwa uye tinogona kutotya. Semuenzaniso, imwe hanzvadzi inonzi Georgina iyo inogara kuEurope inoti: “Pandaiva nemakore 14, amai vangu vaindivengera kushumira Jehovha. Ndakanzwa sendarambwa uye ndakatanga kufunga kuti ndaisava munhu akanaka.” * Imwe hama inonzi Danylo yakati: “Masoja paakandirova, achindituka nekundityisidzira nekuti ndaiva Chapupu chaJehovha, ndakanzwa kutya uye zvakandibvisa chimiro.” Ruvengo rwakadaro runorwadza, asi izvozvo hazvitishamisi. Jesu akataura kuti taizovengwa.—Verenga Mateu 24:9.
2-3. Nei vateveri vaJesu vachivengwa?
2 Nyika inovenga vateveri vaJesu. Inovavengerei? Nekuti ‘hatisi venyika’ sezvakangoitawo Jesu. (Joh. 15:17-19) Saka kunyange zvazvo tichiremekedza hurumende dzevanhu, hatipindiri mune zvematongerwo enyika, hatisaruti mureza kana kuimba rwiyo rwenyika. Tinonamata Jehovha chete. Tinotsigira kodzero yaMwari yekutonga vanhu, asi Satani ‘nevana vake’ vanoramba kuti Mwari ane kodzero iyoyo. (Gen. 3:1-5, 15) Tinoparidza kuti Umambo hwaMwari chete ndihwo huchagadzirisa matambudziko evanhu uye kuti munguva pfupi iri kuuya Umambo ihwohwo huchaparadza vese vanohupikisa. (Dhan. 2:44; Zvak. 19:19-21) Iwayo mashoko akanaka kuvanyoro asi mashoko asina kunaka kune vakaipa.—Pis. 37:10, 11.
3 Tinovengwawo nekuti tinoteerera mitemo yaMwari. Maonero aMwari akasiyana chaizvo nemaonero enyika. Semuenzaniso, vanhu vakawanda vanotsigira zviri pachena upombwe hwakanyanya hwakafanana nehuya hwakaita kuti Mwari aparadze Sodhomu neGomora. (Jud. 7) Sezvo tichitsigira zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro penyaya idzodzo, vanhu vakawanda vanotitsvinyira uye vanotiti takaoma musoro.—1 Pet. 4:3, 4.
4. Zvii zvinotisimbisa patinovengwa nevanhu?
4 Chii chinogona kutibatsira kutsungirira kana vanhu vakativenga uye vakatituka? Tinofanira kutenda zvakasimba kuti Jehovha achatibatsira. Sezvinoita nhoo, kutenda kwedu kunogona ‘kudzima miseve yese inobvira inokandwa neakaipa.’ (VaEf. 6:16) Asi pane chimwezve chinodiwa. Tinodawo rudo. Nei tichiruda? Nekuti rudo “harutsamwiswi.” Runoshingirira uye runotsungirira zvinhu zvese zvinorwadza. (1 VaK. 13:4-7, 13) Iye zvino ngationei kuti kuda Jehovha, vatinonamata navo uye kunyange vavengi vedu kunotibatsira sei kutsungirira patinovengwa.
KUDA JEHOVHA KUNOTIBATSIRA KUTSUNGIRIRA PATINOVENGWA
5. Jesu akakwanisa kuitei nekuti aida Baba vake?
5 Muusiku hwekupedzisira asati aurayiwa nevavengi vake, Jesu akaudza vateveri vake vakavimbika kuti: “Ndinoda Baba, [saka] ndava kuita zvandakaudzwa chaizvo naBaba kuti ndiite.” (Joh. 14:31) Kuda Jehovha kwakabatsira Jesu kuti atsungirire matambudziko akaoma aakasangana nawo. Kuda kwatinoita Jehovha kunogona kutibatsirawo kuita izvozvo.
6. Maererano naVaRoma 5:3-5, vashumiri vaJehovha vanonzwa sei pavanenge vachitsungirira kuvengwa nenyika?
6 Kuda Mwari kwagara kuchibatsira vashumiri vaJehovha kuti vatsungirire kutambudzwa. Semuenzaniso, vaapostora pavakarayirwa kuti varege kuparidza nedare repamusorosoro rechiJudha raiva nesimba, kuda Mwari kwakaita kuti vateerere “Mwari semutongi panzvimbo pevanhu.” (Mab. 5:29; 1 Joh. 5:3) Kuda Mwari zvakadzama kudaro kuri kusimbisawo hama dzedu dzakawanda dziri kutambudzwa nehurumende dzine utsinye uye dzine simba. Nyika painotivenga, hatiori mwoyo asi tinofara.—Mab. 5:41; verenga VaRoma 5:3-5.
7. Tinofanira kuita sei patinopikiswa nevemumhuri?
7 Zvichida kupikiswa nevemumhuri mako ndemumwe wemiedzo mikuru yauri kusangana nayo. Patinotanga kuratidza kuti tava kufarira chokwadi, vamwe vemumhuri vanogona kufunga kuti tatsauswa. Vamwe vangafunga kuti tarasika pfungwa. (Enzanisa naMako 3:21.) Vanogona kutotiitira zvakaipa. Kupikiswa kwakadaro hakufaniri kutishamisa. Jesu akati: “Vavengi vemunhu vachava vaya vemumba make.” (Mat. 10:36) Pasinei nekuti veukama vanotiona sei, hativavengi. Asi kuda kwatinoita Jehovha pakunokura, tinowedzerawo kuda vamwe. (Mat. 22:37-39) Hatimbofi takatyora mitemo yaMwari iri muBhaibheri tichingoitira kufadza mumwe munhu.
Tinogona kumbotambura kwekanguva, asi Jehovha acharamba achitinyaradza uye achitisimbisa (Ona ndima 8-10)
8-9. Chii chakabatsira imwe hanzvadzi kutsungirira payaipikiswa zvakanyanya?
8 Georgina ambotaurwa nezvake akakwanisa kumira akasimba pasinei nekuti amai vake vaimupikisa zvakanyanya. Georgina anoti: “Ini naamai vangu takatanga kudzidza Bhaibheri neZvapupu. Asi papera mwedzi 6, amai vakatanga kundipikisa pandaida kupinda misangano. Ndakazoziva kuti vaitaura nevanhu vakatsauka pakutenda uye nhema dzavaiudzwa ndidzo dzavaishandisa pavaitaura neni. Vaindituka, vaidhonza bvudzi rangu, vaindidzipa uye vairasa mabhuku angu. Pandakanga ndava nemakore 15, ndakabva ndabhabhatidzwa. Amai vangu vakaedza kuita kuti ndisashumira Jehovha nekundiendesa kune imwe nzvimbo yaigara vasikana vechidiki vaiva nemisikanzwa. Vamwe vacho vaiita zvemadhiragi uye vamwe vacho vaipara mhosva. Kupikiswa kunonyanya kuoma kana kuchiitwa nemunhu anofanira kunge achikuda.”
9 Chii chakabatsira Georgina kuti atsungirire? Anoti: “Zuva randakatanga kupikiswa naamai vangu, ndakanga ndichangopedza kuverenga Bhaibheri rese. Ndakanga ndanyatsogutsikana kuti ndakanga ndawana chokwadi uye ndainzwa ndiri pedyo chaizvo naJehovha. Ndaigara ndichinyengetera kwaari uye aindinzwa. Pandaigara panzvimbo yaichengetwa vechidiki, imwe hanzvadzi yaindikoka kumba kwayo uye taidzidza Bhaibheri pamwe chete. Panguva yese iyi ndaisimbiswa nehama nehanzvadzi kuImba yeUmambo. Vaindibata semwana wavo. Ndakanyatsozvionera kuti Jehovha ane simba kupfuura vaya vanotipikisa, pasinei nekuti ndivanaani.”
10. Tinogona kuva nechivimbo chei muna Jehovha Mwari wedu?
10 Muapostora Pauro akanyora kuti hapana chinokwanisa “kutiparadzanisa nerudo rwaMwari ruri muna Kristu Jesu Ishe wedu.” (VaR. 8:38, 39) Kunyange zvazvo tingatambura kwekanguva, Jehovha acharamba achitinyaradza uye achitisimbisa. Uye sezvataona pana Georgina, Jehovha anotibatsirawo achishandisa hama nehanzvadzi dzedu dziri muungano.
KUDA VATINONAMATA NAVO KUNOTIBATSIRA KUTSUNGIRIRA PATINOVENGWA
11. Rudo rwakataurwa naJesu pana Johani 15:12, 13, rwaizobatsira sei vadzidzi vake? Taura muenzaniso.
11 Usiku hwekupedzisira asati afa, Jesu akayeuchidza vadzidzi vake kuti vadanane. (Verenga Johani 15:12, 13.) Aiziva kuti kuzvipira kuda vamwe nemwoyo wese, kwaizovabatsira kuti varambe vakabatana uye kuti vatsungirire kuvengwa nenyika. Funga nezveungano yekuTesaronika. Kubvira payakaumbwa, hama nehanzvadzi dzemo dzaitambudzwa. Asi dzakaratidza muenzaniso wekuperera uye wekuda vamwe. (1 VaT. 1:3, 6, 7) Pauro akavakurudzira kuti varambe vachiratidza rudo, kunyange ‘kuwedzera pane zvavaiita.’ (1 VaT. 4:9, 10) Rudo rwaizoita kuti vanyaradze vakaora mwoyo uye vatsigire vasina simba. (1 VaT. 5:14) Vakatevedzera zvavakarayirwa naPauro nekuti mutsamba yake yechipiri iyo yakazonyorwa papera rinenge gore, Pauro akavaudza kuti: “Kudanana kwenyu kuri kuwedzera.” (2 VaT. 1:3-5) Kudanana kwavaiita kwakavabatsira kuti vatsungirire mamiriro ezvinhu akaoma uye kutambudzwa.
Kuda hama nehanzvadzi dzedu, kunogona kutibatsira kutsungirira patinovengwa (Ona ndima 12) *
12. Paiitika hondo mune imwe nyika, hama nehanzvadzi dzemo dzakaratidza sei kuti dzinodanana?
12 Funga zvakaitika kuna Danylo nemudzimai wake. Hondo payakasvika muguta ravaigara, vakaramba vachipinda misangano, vachiita zvese zvavaigona kuti vaparidze uye vaipawo hama nehanzvadzi dzavo zvekudya zvavaiva nazvo. Rimwe zuva Danylo akasvikirwa nemasoja aiva nepfuti. Danylo anoti: “Vakandiudza kuti ndirege kuva mumwe weZvapupu zvaJehovha. Pandakaramba, vakandirova uye vakaridzira pfuti nechepamusoro pangu vachiita sevaida kundipfura. Vasati vaenda, vakati vaizodzoka kuzobata mudzimai wangu chibharo. Asi hama dzedu dzakabva dzakurumidza kutikwidza chitima kuti tiende kune rimwe guta. Handimbofi ndakakanganwa rudo rwandakaratidzwa nehama idzodzo. Patakasvika kune rimwe guta, hama dzeko dzakatipa zvekudya uye dzakandibatsira kuwana basa uye pekugara! Izvi zvakaita kuti tizokwanisa kugamuchira Zvapupu zvaitiza hondo.” Zvakaitika izvi zvinoratidza kuti kudanana kwatinoita sehama kunotibatsira kutsungirira patinovengwa.
KUDA VAVENGI VEDU KUNOTIBATSIRA KUTSUNGIRIRA RUVENGO
13. Mweya mutsvene unotibatsira sei kuti titsungirire pakushumira kwatinoita Jehovha kunyange patinenge tichivengwa nevanhu?
13 Jesu akaudza vateveri vake kuti vade vavengi vavo. (Mat. 5:44, 45) Kuita izvozvo kuri nyore here? Kwete hakusi! Asi tinogona kuzviita tichibatsirwa nemweya mutsvene waMwari. Zvibereko zvemweya waMwari zvinosanganisira rudo, mwoyo murefu, mutsa, unyoro uye kuzvidzora. (VaG. 5:22, 23) Zvibereko izvi zvinotibatsira kuti titsungirire ruvengo. Vanhu vakawanda vakarega kutipikisa nekuti mumwe munhu anoshumira Jehovha angava murume wavo, mudzimai, mwana kana muvakidzani wavo akavaratidza zvibereko izvozvo. Vakawanda vawo vakatosvika pakuva hama nehanzvadzi dzedu. Saka kana uchiomerwa nekuda vaya vanokuvenga nekuti unoshumira Jehovha, nyengeterera mweya mutsvene. (Ruka 11:13) Uye iva nechokwadi chekuti kuteerera Mwari ndiko kwakanaka nguva dzese.—Zvir. 3:5-7.
14-15. VaRoma 12:17-21 yakabatsira sei Yasmeen kuti aratidze rudo kumurume wake kunyange zvazvo aimupikisa?
14 Funga zvakaitika kuna Yasmeen, uyo anogara kuMiddle East. Paakava mumwe weZvapupu zvaJehovha, murume wake akafunga kuti Yasmeen akanga anyengerwa uye akaedza kumurambidza kushumira Mwari. Murume wacho akamutuka uye akaudza hama dzake, mufundisi uye n’anga kuti vamutyisidzire vachimupomera kuti akanga achiparadzanisa mhuri yake. Murume wake akatombotuka hama pamusangano weungano! Yasmeen aigara achichema nekuti aibatwa zvisina kunaka.
15 Hama nehanzvadzi dzainyaradza Yasmeen uye dzaimusimbisa paImba yeUmambo. Vakuru vaimukurudzira kuti aite zvinotaurwa pana VaRoma 12:17-21. (Verenga.) Yasmeen anoti: “Zvakanga zvakaoma. Asi ndakakumbira Jehovha kuti andibatsire uye ndakaita zvese zvandaigona kuti ndiite zvinotaurwa neBhaibheri. Saka murume wangu paaimwaya mavhu mukicheni, ndaiatsvaira. Paaindituka, ndaipindura neunyoro. Uye paairwara, ndaimupepa.”
Kana tikada vanhu vanotitambudza, vanogona kuzochinja mwoyo yavo (Ona ndima 16-17) *
16-17. Wadzidzei pane zvakaitika kuna Yasmeen?
16 Yasmeen akawana mubayiro wekuratidza murume wake rudo. Anoti: “Murume wangu akawedzera kuvimba neni nekuti aiziva kuti ndinogara ndichitaura chokwadi. Akatanga kunyatsonditeerera pataitaura zvechitendero uye akabvuma kuti azoita kuti pamba pave nerugare. Iye zvino anondikurudzira kuenda kumisangano yeungano. Tava kunyatsogarisana zvakanaka uye pamba pedu pava nerunyararo. Tarisiro yangu ndeyekuti murume wangu achagamuchira chokwadi uye achabatana neni pakushumira Jehovha.”
17 Zvakaitika kuna Yasmeen, zvinoratidza kuti rudo “runoshingirira zvinhu zvese, . . . rune tariro pazvinhu zvese, runotsungirira zvinhu zvese.” (1 VaK. 13:4, 7) Rudo rune simba kupfuura ruvengo. Rudo runogona kuchinja munhu orega kutipikisa uye runoita kuti Jehovha afare. Asi kunyange vanhu vanotipikisa vakaramba vachitivenga, tinogona kuramba tichifara. Tingazviita sei?
TINOGONA KUFARA PATINOVENGWA
18. Nei tichigona kufara patinovengwa?
18 Jesu akati: “Munofara imi pese pamunovengwa nevanhu.” (Ruka 6:22) Hatisarudzi kuti vanhu vativenge. Hatinakidzwi nekutambudzirwa kutenda kwedu. Saka nei tichigona kufara patinovengwa? Ngationei zvikonzero zvitatu. Chekutanga, patinotsungirira, tinofarirwa naMwari. (1 Pet. 4:13, 14) Chechipiri, kutenda kwedu kunonatswa uye kunowedzera kusimba. (1 Pet. 1:7) Uye chechitatu, tichawana mubayiro wakakura chaizvo, upenyu husingaperi.—VaR. 2:6, 7.
19. Nei vaapostora vakafara pashure pekunge varohwa?
19 Pashure pekunge Jesu amutswa, vaapostora vakawana mufaro waakanga ataura nezvawo. Pavakarohwa ndokunzi varege kuparidza, vakafara. Nei vakafara? “Nekuti vakanga vanzi vakakodzera kuzvidzirwa zita” raJesu. (Mab. 5:40-42) Vaida tenzi wavo kupfuura kutya kwavaiita vavengi vavo. Uye vakaratidza rudo rwavo nekuparidza mashoko akanaka “vasingaregi.” Hama dzedu dzakawanda mazuva ano dziri kuramba dzichishumira dzakatendeka pasinei nematambudziko. Vanoziva kuti Jehovha haazombokanganwi basa ravo nerudo rwavainarwo nekuda kwezita rake.—VaH. 6:10.
20 Nyika icharamba ichitivenga, chero bedzi ichiripo. (Joh. 15:19) Asi hatifaniri hedu kutya. Sezvatichaona munyaya inotevera, Jehovha ‘achasimbisa uye achadzivirira’ vanhu vake vakavimbika. (2 VaT. 3:3) Saka ngatirambei tichida Jehovha, tichida hama nehanzvadzi dzedu uye tichida kunyange vavengi vedu. Kana tikateerera zano iri, ticharamba takabatana uye takasimba pakunamata. Tichaita kuti Jehovha akudzwe uye ticharatidza kuti rudo rune simba chaizvo kupfuura ruvengo.
KUTI TITSUNGIRIRE KUVENGWA, NEI TICHIFANIRA . . .
kuda hama nehanzvadzi dzedu?
kuda vavengi vedu?
RWIYO 106 Kushanda Kuti Tive Nerudo
^ ndima 5 Munyaya ino tichaona kuti kuda Jehovha, vatinonamata navo kunyange vavengi vedu kunotibatsira sei kutsungirira kuvengwa nenyika. Tichaonawo kuti nei Jesu akati tinogona kufara patinovengwa.
^ ndima 1 Mamwe mazita akachinjwa.
^ ndima 58 KUTSANANGURWA KWEMUFANANIDZO: Pashure pekunge Danylo atyisidzirwa nemasoja, hama dzakabatsira iye nemudzimai wake kuti vatamire kune rimwe guta uye vakagamuchirwa zvakanaka.
^ ndima 60 KUTSANANGURWA KWEMUFANANIDZO: Yasmeen aipikiswa nemurume wake, asi vakuru vakamupa mazano akanaka. Akaratidza kuti aiva mudzimai akanaka uye aimupepa paairwara.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Rudo Runotibatsira Kutsungirira Patinovengwa